शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री - Karobar National Economic Daily
शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री
query_builderJune 6, 2017 6:50 PM supervisor_accountकारोबार visibility1056
काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार दिउँसो दोस्रो पटक बसेको व्यवस्थापिका स‌ंसदबाट १३ वर्षपछि देउवा नेपालको ४० औँ प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
देउवाको पक्षमा आजको बैठकमा उपस्थित भएका ५५८ सा‌ंसदहरुमध्ये ३८८ जनाले प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गरेका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा सोमबार साँझ बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेले संसदमा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि देउवालाई आज प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनलगायत महत्वपूर्ण कार्यसूची रहेको संसद्को बैठक अवरोध गर्दै आएको एमाले तथा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताबीच सोमबार भएको सहमतिका आधारमा संसद खुलेको थियो ।
कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । देउवाविरुद्ध एमालेसहितका अन्य दलले उम्मेदवारी दर्ता नगराएपछि उनी सजिलै प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
दिउँसो १ बजे बसेको संसद पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओली र प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी देउवाले पहिलो बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यसपछि अपरान्ह पौने पाँच बजे बसेको बैठकमा भएको मतदानमा दुईतिहाइ बहुमतसहित देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए ।
यही जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मिति तय भएकामा नेकपा एमालेले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोधमा संसद् अवरोधको चेतावनी दिएकाले कारण बैठक बस्न सकेको थिएन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बहुमतका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि पठाइएको यही जेठ १८ मा प्राप्त पत्र एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा प्रस्तुत मनोनयन नभई संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको सम्बोधनसँगै आजदेखि संसद्को बैठक सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ १० मा राजीनामा दिएका थिए ।
आजको बैठकको सुरुमा शीर्ष नेताहरुको सम्बोधन प्रारम्भ भएको छ ।
देउवा गणतन्त्र आएपपछि १० औं प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएका देउवा बि.स. २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
अन्तिम पटक उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिँदा प्रधानमन्त्री भएका थिए। करिव १३ वर्षपछि देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
को हुन् शेरबहादुर
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको समेत नेतृत्व गर्दै वि.सं. २०५२ सालमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
नेपाली कांग्रेसको बिभाजनपछि उनी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति थिए | देउवाले यसअघि डडेलधुरा क्षेत्र नं. १ र कञ्चनपुर जिल्ला क्षेत्र नं. ४ बाट संविधानसभामा चुनाव जितेका थिए ।
२०४८,२०५१ र २०५६ का संसदीय निर्वाचनहरूमा डडेलधुरा जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट विजयी देउवाले गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेदारी सम्हालिसकेका छन् ।
उनी माओवादी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष पनि भए। प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका देउवा नेवि संघका प्रथम सभापति पनि हुन् ।
सुदूर पश्चिममा नेपाली कांग्रेसका सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन् उनी । राजनैतिक संघर्षका क्रममा उनले नौ वर्ष जेलजीवन बिताएका छन्। देउवाले नेतृत्व गरेको जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा "असक्षम"को आरोप लगाई विघटन गरेका थिए ।
उनैले दुई वर्ष पछि २०६१ सालमा देउवालाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पार्टीको अन्तरिक द्वन्द्वका क्रममा देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को गठन गरेका थिए ।
२०६४ सालमा सो पार्टीको नेपाली कांग्रेससँग एकीकरण भएपछि उनी वरिठ नेतामा भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका देउवा सोही विषयमा लन्डन स्कूल अफ इकोनमिक्सका रिसर्च फेलो रहिसकेका छन् ।